Dowlada Itoobiya oo si cad u sheegtay inay taageereyso mid ka mid ah musharaxiinta Madaxweyne ee Soomaaliya | Gaaloos.com
Home » News » Dowlada Itoobiya oo si cad u sheegtay inay taageereyso mid ka mid ah musharaxiinta Madaxweyne ee Soomaaliya
Dowlada Itoobiya oo si cad u sheegtay inay taageereyso mid ka mid ah musharaxiinta Madaxweyne ee Soomaaliya
Ra’isul wasaaraha Itoobiya Haile-mariam Desalgn ayaa ka hadlay doorashooyinka Somalia iyo xanta sheegeysa iney taageerayaan musharaxa Xasan Shiikh Maxamuud inuu talada dalka dib ugu soo laabto.
Haile-mariam Desalgn ayaa sheegay in Itoobiya ay ku faraxasn tahay doorashooyinka Somalia ka dhacaya oo uu xusay iney astaan u yihiin in Soomaalidu ay haatan gaareen biseyl siyaasadeed.
Waxa uu sheegay in xukuumaddiisa ay saaxiib dhow la tahay Madaxweynaha talada haya oo mar labaad xafiiska u tartmaya Xasan Sheekh.
Dowladda Xasan Sheekh Maxamuud ayuu ku bogaadiyey waxqabadkeeda afartii sano ee afartii sano ee la soo dhaafay.
Ra’iisul wasaaraha itoobiya, Hailemariam Desalegn ayaa hoosta ka xarriiqay in hoggaanka federaalka iyo dowlad-goboleedyada Somalia dadkooda ku hageen hab taageeraya nabada iyo dib u soo celinta hanaanka dowladnimo.
“Waxaan amaanayaa hoggaanka Somalida ee haatan, guud ahaan hoggaanka federaalka iyo maamul-goboleedyada, maxaa yeelay waa iyaga kuwa hoggaaminaya hannaanka siyaasada wadanka, waxay horkaceen hab gacansiinaya Soomaalida iney dhibaatada ka baxaan.” Ayuu yiri raisul wasaraha Itoobiya.
Desigeln ayaa la weydiiyey hadii uu jiro musharax dowladiisu ay jeclaan laheyd inuu ku soo baxo doorashada madaxweynaha Somalia ayuusan qarsanin taageerada uu hayo inuu talada dib ugu soo laabto musharaxa Xasan Shiikh Maxamuud.
“Madaxda iminka talada heysa, waxaanu nahay saaxiibo isu dhow, haddii arrimahu ku sii socdaan sidaas oo xafiiska ay sii joogaan, waanu doorbidi lahayn, taasi kama dhigna mid naga reebeysa dadka kale, sababtoo ah mid kasta oo ka mid ah musharaxiinta kale waanu la soo shaqeynay oo xiriir ayaan leenahay. waxaana kaloo aan la shaqeyn karnaa madaxweyne iyo ra’iisul wasaare cusub.” ayuu yiri raisul wasaare Desigln oo wareysi gaar ah siinayey Tv-ga Universal isagoo ku sugan magaalada Jigjiga.
Itoobiya ayaa 20-kii sano ee ugu dambeeyey milateri ahaan iyo siyaasad ahaan ku lug laheyd arrimaha Soomaaliya.
Ra’isul wasaaraha xafiiska baneynaya ee Somalia Cumar Cabdi Rashiid oo katirsan musharaxiinta ku loolamaya madaxweynaha Somalia ayaa maalmo ka hor ku eedeeyey dowlada deriska qaarkood iney fara gelin toos ah ku hayaan doorashada madaxweynaha iyagoo taageeraya buu yiri musharax gaar ah.
Title: Dowlada Itoobiya oo si cad u sheegtay inay taageereyso mid ka mid ah musharaxiinta Madaxweyne ee Soomaaliya